Idm ပြသနာ နှင့် ဖြေရှင်းနည်း အမျိုးမျိုး - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Idm ပြသနာ နှင့် ဖြေရှင်းနည်း အမျိုးမျိုး
ဒီနေ့ ဒီ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးဖို့တော့ အတွေးပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ နယ်ပယ်မှာ တကယ်ကို အဆင်မပြေတာလေးတွေကို သွားတွေ့တာနဲ့ လူတိုင်းလုပ်တက်စေဖို့ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ။ တကယ်တော့ သိသွားရင် မခက်ပါဘူး။ မသိခင်တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကို လူတိုင်း သိပြီးသားစကားပါ ။IDM ပြသနာကို တက်လာပြီဆိုရင် လူတော်တော်များများ တွန့်သွားကြတယ်။ဒီပြသနာက တကယ်တန်းတော့ မခက်ပါဘူး. .. ကဲ့ပြောနေတာ ကြာပါတယ်။ ဖြေရှင်းမယ့် နည်းလမ်းတွေ ကြည့်ကြရအောင်...ဒါနဲ့ စကားမစပ် မိသားစုမှာ စာမရေးတာ ကြာပါပြီ ဒီနေ့က စပြီး စာပြန်ရေးပါတော့မယ်။
IDM ကို Activate လုပ်နည်း ဆိုပေ့မယ့် ဆော့ဝဲတော်တော်များများကို ဒီနည်း တွေနဲ့ပဲ့ Activate လုပ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ အောက်က နည်းလမ်းတွေ အကုန်လုံး လိုက်လုပ်နေရမှာလားလို့တော့ ပြန်မမေးကြပါနဲ့ … အဆင်ပြေရာ တနည်းနည်း နဲ့ Activate လုပ်နီုင်ပါတယ်။ တနည်းနည်း နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Crack နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းကို အရင်ဆုံး စြေ့ပာပြပါ့မယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နမူနာ အနေနဲ့ ကျွန်တော် IDM မှာ crack ရော patch ရော.. Keygen ရော ပါတဲ့ ဖိုင်ကို အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ...
အထဲ့မှာ Keygen ,Crack , နဲ့ Patch ဖိုင် အကုန်ပါပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ ၃ ခုလုံးနဲ့ ရှင်းပြတာကတော့ ဒီဆော့ဝဲတင် မဟုတ်ပါဘူး .. ကျန်တဲ့ ဘယ်ဆော့ဝဲမဆို Keygen ,Crack , နဲ့ Patch တွေနဲ့လာရင် ဒီတိုင်းပဲ့ Full version ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ရှင်းပြမှာ ပါ...
အရင်ဆုံး ရမ်းပြီးပြီဆိုရင် Full သုံးလို့ မရဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကီးတွေတောင်းနေရင် IDM မှာ ဒီအပေါ်က ပုံလေးပေါ်နေတာကိုတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် Crack နဲ့ အရင်ဆုံး Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပြပါမယ်။
Crack ဖြင့် Activate လုပ်နည်း..
ဒီကောင်လေးကတော့ IDMan ဆိုတာလေးကို Copy ကူးပြီး ကျွန်တော်တို့ IDM ရမ်းခဲ့တဲ့ Location ထဲ့ကို သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို location လည်းဆိုရင် အောက်မှာ နမူနာ ပြထားပါတယ်
ဒီ IDMan ဆိုတဲ့ Copy ကူးလာတာလေးကို Paste လုပ်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရင်ရှိပြီးသား IDMan ကို ဖျက်ပစ် ပြီးမှ ထည့်လည်း ရသလို မဖျက်ပဲနဲ့ Copy and replace လုပ်လည်း ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Window က 32 bit လား 64 bit လား သိရပါမယ် ။ 32bit ဆိုရင် 32 regkey ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Merge လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒါဆိုရင် Crack ချိုးလို့ ပြီးပါပြီ။ Full version ရသွားပါပြီ။
IDM Cracker tool ဖြင့် Activate လုပ်နည်း..
ဒီနည်းကတော့ အတော်ကို လွယ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး IDM cracker tool ကို ဒီအောက်က Location တိုင်း သွားပြီး Paste ပေးပါ။
"C:\_Program Files\_Internet Download Manager"
အဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Start ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ အောက်ညာဘက်ခြမ်းကလို အစိမ်းလိုင်းအပေါ်ထိ တက်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ သူက Activate လုပ်လို့ ပြီးပါပြီဆိုတာကို Box လေးနဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက ပိုလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Patch ဖြင့် Activate လုပ်နည်း...
ဒီနည်းကတော့ အရင်နည်းတွေ အတိုင်းပဲ့ ‘ဒီ Program ရမ်းထားတဲ့ Location ကိုပဲ့ သွားရဦးမှာပါပဲ့... ဒီအောက်က နေရာလေးပေါ့
ဒီနေရာလေးကို ရောက်ပြီဆိုရင် Patch ကို Copy ကူးပြီး ဒီ Location folder ထဲကို ထည့်ပေးပါ။ နောက် ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ ရမ်းပါ။ အောက်ကလို Box လေး တပ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ first name. last name ထည့်ပေးရပါမယ်။ တခုထည့်ပေးပြီးတိုင်း Ok ပေးရပါမယ်။ သူဘာသာ Serials ကိုတော့ ဖြည့်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်က Location ကိုပဲ့ သွားပြီး Paste လုပ်ပေးယုံပါပဲ။ Paste လုပ်ပြီးတာနဲ့ Run as administartor နဲ့ ရမ်းလိုက်ရင် သူ့ဘာသာ Activate လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Keygen နှင့် Activate လုပ်နည်း...
ဒီနည်းကတော့ အဆင်ပြေသွားတာ ရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့အခါတွေလည်း ရှိတာယ်.။ အဆင်ပြေတာတော့ များပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နည်းလေး သိထားရင် အကုန် အဆင်ပြေမယ် မဟုတ်လား... အဲ့တော့ အောက်ကလို ပေါ်နေတဲ့ Box လေးတပ်လာရင် ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ...အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက Keygen ကို ဖွင့်ရပါမယ်။
Keygen ထဲ့က Serials ကို ကူးSerials number ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပြီး First name last name နဲ့ Email ကိုတော့ ကြိုက်တာ ထည့်ပါ။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Full version ရပါပြီ။
ဒီနည်းကတော့ ဘာမှ မလုပ်ချင်သူတွေတွက်တော့ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အထဲ့မှာ ပါတဲ့ IDM setup ကို ရမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ သူဘာသာ Auto activate လုပ်ပေးပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Last edited by tu tu; 26-11-2011 at 01:17 PM.. Reason: remove Arial font
အောက်ပါအသင်းဝင် 34 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, စနိုးလေး, ထိန်လင်းမောင်, မိုးတိန်, မျိုးလေး, ရှိုင်းသော်တာမင်း, အသေးလေး(4tL), ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, ပြည့်ဖြိုးကိုကို, နိုးတူး, arkaraung, azp09, goldstar, htoo war, htun30, iamaglay, kingofvirus, kktth, kyawswarl, KznT, linthuraaung, maJunior, pannuko, phyomyintthein, PyaitSone, sein min, someone22, tu tu, wahgyi, Win Naing Tun, zo
ပြန်စာ - Idm ပြသနာ နှင့် ဖြေရှင်းနည်း အမျိုး&#
idm က sky net ကျတော့ ဆွဲ လို့ ရတယ် mpt ကျတော့ ဆွဲလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါ mpt နဲ့ ဆွဲ လို့ ရ အောင် ပြောပြပါ ဦးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ယုယအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, aozora, kyawswarl, linthuraaung, pannuko, Win Naing Tun, zo
ဘော်ဒါတို့ idm က mpt လိုင်း နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒေါင်းမရတာလည်း skynet လိုင်း နဲ့ ဒေါင်းလို့ ရတယ် mpt ဒေါင်းလို့ ရအောင် ဘယ်လိုဒေါင်း ရ သလည်း ရှင်းပြ ပေးပါဦး ဘော်ဒါ ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ယုယအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, linthuraaung, zo
ပြန်စာ - Idm ပြသနာ နှင့် ဖြေရှင်းနည်း အမျိုး&a
အကို က MPT user နော် အဒါဆို အကို option ဆိုတာရှိပါတယ် proxy ဆိုတာကိုဝင်ပြီးတော.use proxy ကိုသွင်ရပါတယ် အကိုအဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မောင်မျှိူးဇော်ထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, စိုးမြတ်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, arkaraung, azp09, g00gle, zo
Find More Posts by မောင်မျှိူးဇော်ထွန်း
ကျနော် idm နဲ့ဆွဲတာ ပိုပြီး မြန်အောင် ဘယ် လို ဆွဲ ရင် ရ လည်း မြန်အောင် နည်းလေး ပြောပြ ပေးပါ နော် ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
DM နဲ့ပတ်သက်ပြီ တစ်ခုလောက်ကူညီပါဦး ကျနော် IDM နဲ့ download ဆွဲတာ အကုန် အဆင်ပြေတယ် ဒါပေမယ့် android phone ရဲ့ game application apk တို့ ကျ IDM နဲ့ ဆွဲလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ပုံမှန် တိုင်းဆိုရင် ကျနော် mediafire ပဲဖြစ်ဖြစ် youtube ပဲဖြစ်ဖြစ် စသဖြင့် ဒေါင်း မယ့်စာတာ ကလစ်တချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ idm က သူပါသူ ဒေါင်းသွားတယ် android phone ရဲ့ game application apk တို့ ကျ IDM ဒေါင်း မယ့်စာတာ ကလစ်တချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ idm က မဒေါင်းပေးဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါ ကျနော်ကို android phone ရဲ့ game application apk တို့ IDM နဲ့ ဆွဲလို့ရအောင် နည်းလေး တစ်ချက် ရှင်းပြ ပေးပါ နော် ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
30-09-2012, 01:50 PM
်Filetypes မှာ APK လို့ရေးပြီး ok နှိပ်ပေးပါ
အခြား file Extensions များဒေါင်းလဲ ထိုနည်းအတူထည့်ပေးးရတယ်
Last edited by kyawminkhoung; 30-09-2012 at 08:00 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, g00gle, tu tu
ကျတော့်မှာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်တာက သူ့ကို စသုံးပြီဆိုတာနဲ့ ၄-၅ ရက်လောံကျရင် ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းဖို့ icon လေး တက်မလာတော့ဘူး....အဲလိုဖြစ်လို့ရှိရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ အသစ် ပြန်သွင်းရတယ် ..အဲဒီတော့မှရတယ်....အဲဒါ ဘယ်နေရာလေးမှာများ ပြင်လို့ရမလဲမသိဘူး.....ဖြစ်ဖူးကြလား မသိဘူး.....
ကျတော့်မှာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်တာက သူ့ကို စသုံးပြီဆိုတာနဲ့ ၄-၅ ရက်လောံကျရင် ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းဖို့ icon လေး တက်မလာတော့ဘူး....အဲလိုဖြစ်လို့ရှိရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ အသစ် ပြန်သွင်းရတယ် ..အဲဒီတော့မှရတယ်....အဲဒါ ဘယ်နေရာလေးမှာများ ပြင်လို့ရမလဲမသိဘူး.....ဖြစ်ဖူးကြလား မသိဘူး.....
အဲဒီနေရာလေးတွေကိုစစ်ကြည့်ပေးပါ..တစ်ခါတစ်လေလိုင်းကျရင် burmeseclassic movie ကို ကျွန်တော်ဒေါင်းရင်လဲမပေါ်လာတော့ဘူး..
Last edited by kyawminkhoung; 05-10-2012 at 12:13 PM..
g00gle, tu tu
30-10-2012, 07:56 PM
ကျနော် idm နဲ့ Youtube ထဲက video တွေ ဒေါင်းတာ ကြာ နေလို့ အဲဒါ မြန်အောင် ဘယ်လို လုပ်ပြီ ကူရ သလည်း နည်းလေး ပြောပြ ပေးပါ နော် ကျန်တာ တွေ ဒေါင်း ရင် မြန် လို့ ပါ နော် ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
15-11-2012, 11:45 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2012
facebook messagerလေးများရှိလားမသိဘူး အကိုတို့. . .. . . . . .. .. . .. .. . .
Find More Posts by p8yohtet
21-11-2012, 06:42 PM
idm software ကို ကျနော် ဆိုင်မှာသွားသုံးတာ အရင်းတုန်းက install လုပ်လို့ ရတယ် ခုနော်ပိုင်မှာ အဲဒီဆိုင်က ဘယ် software ဆို install လုပ်လို့ မရအော် လုပ်ထားတယ် အဲဒါ install လုပ်လုကိပြီဆိုရင် ဖီနစ်မရောက်ခင်မှာ ပဲ မရျတော့တာ အဲဒါ ကျနော် idm software install လုပ်လို့ရအောင် နည်းလေး ပြောပြ ပေါးပနော် သူတို့က စက်ကို ဘယ်လို လုပ်ထားတာမသိလို့ပါ သူတို့စက်က windows7တင်းထားပါတာပါ
22-11-2012, 11:13 AM
အကိုရေ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Poartable IDM လေးကိုယူပြီးတော့ သုံးကြည့်လိုက်ပါနော်။ အဆင်ပြေပါစေ.......
Portable Internet Donwload Manager
ကျနော်ကို တစ်ခုလောက်ကူညီပါဦး idm က mediafire ကနေပြီ ဒေါင်းရင် resume က yes မပြတော့ဘူး no ပဲ ပြနေလို့ ကျန်တယ် ဟာတွေဒေါင်းရင် yes ပြတယ် နောက်ပြီတော့ http://www.solidfiles.com/ ဖိုင်းတို့ sharebeast တို့ ကနေပြီ ဒေါင်းရင် တစ်ခါတလေ ဒေါင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် www.drobox.com ကနေပြီ ဒေါင်းရင် idm က မဒေါင်းတော့ဘူး အဲဒါ တွေ ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေ အောင် နည်းလေး ပြောပြ ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ပြီတော့ file type ကနေပြီ RAR ZIP ထည့်တာကို တစ်ချို့ ကျ ဒေါင်းဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါဦး
IDM software full version လေးလိုချင်လို့ပါ.........
IDM software full version လေးလိုချင်လို့ပါ......အရင်ဖိုင်တွေက Invalid or Deleted File.....အဲလိုတွေပဲ တက်လာတော့လို့ပါ.......
ပို့စ် 189 ခုအတွက် 1,302 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မိတ်ဆွေကောင်း တယောက်ရှိတာဟာ ဘဝမှာအမြင့်ဆုံး စိတ်ချမ်းသာစ၇ာဖြစ် ပြီးတော့
ကိုယ်ကိုတိုင်က မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်၇တာတော့ အခတ်အခဲဆုံး အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ko lin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ko lin ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by ko lin
31-10-2013, 07:04 AM
Originally Posted by p8yohtet
မေးထားတာတော့ ကြာလှပြီ။ ဒီအချိန်မှတော့ p8yohtet မသိချင်တော့လောက်ပေမယ့် နောက်မေးလာမယ့် သူတွေအတွက် Sharing လုပ်ပါရစေ။ Facebook ထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို Messenger ကနေ တဆင့် စကားပြောချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Instant Messaging Software တစ်ခုခုကို သုံးပြီး Chat နိုင်ပါတယ်။
Originally Posted by ko lin
IDM 6.05-full+patch..... ကျတော့မှာရှိတဲ့ ကောင်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
နောက်ပြီး ကိုလင်းရေ ... ကျွန်တော် ဒီနေ့မှ ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ Internet Download Manager 6.18 build5Final Retail ရှိတယ် ... လောလောဆယ်တော့ Latest ပဲ။ နောက်ဆို Firefox Nightly က Final Version ဖြစ်လာရင် IDM ခပ်မြင့်မြင့် ဆောင်ထားမှ အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။
Last edited by KznT; 31-10-2013 at 07:26 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, arkaraung, bonge, diaper, ko lin, pannuko, phoelapyaee, thureinsoe, tu tu
IDM က အခုဒေါင်းရင် cannot download this file ဆိုပြီး box တစ်ခုကျလာပြီး ဒေါင်းလို့ မရတော့လို့ပါ........No.2ဖြစ်တဲ့ Firewall error တက်နေတာပါ ... pls check your firewall setting and ensure that IDM has permits to access the internet..... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါဦးနော်.....
23-02-2016, 10:07 AM
ဒေါင်းလုပ် လို့မရတော့ဘူး ခင်ဗျာ လင့်တွေက အလုပ်မလုပ်တော့တာလားမသိဘူး
Moethout htum ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Moethout htum
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:46 PM